July 2019 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သင်သုံးနေကြ ပါရာစီတမောဆေး နှင့် ပတ်သတ်ပြီး မသိမဖြစ်အချက်များ
သင်သုံးနေကြ ပါရာစီတမောဆေး နှင့် ပတ်သတ်ပြီး မသိမဖြစ်အချက်များ ခုကာလ ဟာ တုပ်ကွေးရာသီပါ မဖျားတဲ့သူ ဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ ရလောက်အောင် ဖျားနေကြတာ အရမ်းပါပဲ ဖျားတာ ခေါင်းကိုက် နာကျင်တာ တွေအတွက် ဆေးခန်းကို မပြသေးခင် ပါရာစီတမော့ လေးသောက်တတ်ကြပါတယ်…
ခေါင်းကိုက်နေစဉ် မလုပ်သင့်သောအရာများ လူတွေကိုမကြာခန ဒုက္ခတွေပေး၊အလုပ်အကိုင်တွေပျက်၊စိတ်တွေပါညစ်စေတတ်တဲ့ ဝေဒနာ။ ခေါင်းကိုက်ရင် ဘယ်လောက်ခံစားရခက်လဲလူတိုင်းနီးပါးအသိ။ အဲ့ဒီလိုခေါင်းကိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့၊မလုပ်သင့်တဲ့အရာလေးတွေအကြောင်းကို ဒီတစ်ခေါက်မှာပြောပြချင်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်နေစဉ်မလုပ်ရမှာတွေက ဘာတွေလဲ??? ၁။ဆေးသောက်၊ဆေးခန်းပြရန်နောက်ကျနေခြင်း၊အချိန်ဆွဲခြင်း။ အချိန်တန်ပျောက်သွားမှာပါဆို၍ဆေးမသောက်ပဲနေခြင်း၊ဆေးထိုးဆေးစားရမှာကြောက်၍ဆေးခန်းမပြပဲနေခြင်းတို့ဟာ ရောဂါဝေဒနာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေရုံမက အသက်အန္တာရယ်ပါရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာပြင်းထန်သောရောဂါများ(ဥပမာ-ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ခြင်း၊ဦးနှောက်အမြေးပါးရောင်ခြင်း စသည်)နှင့် ဆက်နွှယ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ကဖင်းဓါတ်များ အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်း။…
ဖျားနာနေစဉ် မလုပ်သင့်သောအရာများ အားလုံးပဲကျန်းခန့်သာလို့ မာပါစခင်ဗျာ။ မိုးအေးအေးနဲ့ ဖျားပြီးကြပြီလား??? ဖျားပြီးတဲ့သူတွေရော မဖျားရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ စကားလေးနည်းနည်းပြောမယ်နော်။ ဘာပြောမှာလဲဆိုတော့ ဖျားနာနေစဉ်မလုပ်သင့်တဲ့အချက်ကလေးတွေအကြာင်းပြောမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မဖျားသေးရင်ပဲခေတ်မမှီတော့မလိုဖြစ်နေတဲ့ တုပ်ကွေးရာသီမှာ ဒီအချက်လေးတွေကိုတော့သိထားသင့်ပါတယ်လေ။ ဖျားနာနေစဉ် မလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေက ဘာတွေလဲ??? ၁။စောင်အထူကြီးပတ်၊လေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့အနွေးထည်ထူထူကြီးဝတ်ဆင်ထားခြင်းဟာ သင့်ကိုစမတ်မဖြစ်စေပါဘူး။ ကိုယ်ကပူရတဲ့အထဲ ၎င်းတို့ကပါခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုပိုမိုမြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။…
ကျန်းမာရေးအတွက်စားသင့်သော ငါးနှင့် ငါးကြီးဆီ
ကျန်းမာရေးအတွက်စားသင့်သော ငါးနှင့် ငါးကြီးဆီ ဒီနေ့ခေတ်ဟာ အတတ်ပညာတွေ လုပ်ငန်းခွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါများလာပါတယ် အဲလိုအပြိုင်အဆိုင် တိုးတတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ တပါးသူထက် မသာရင်တောင်တန်းတူလိုက်နိုင်ဖို့ အရေးပါလှပါတယ် အဲလို လိုက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကျန်းမာဖို့က အဓိကပါ ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် ဟိုနားဒီနာ နာ စတာတွေသာဖြစ်နေရင် ဘဝတတ်လမ်းအတွက်…
လှပကောင်းမွန်သော အသားအရေဖြစ်စေဖို့ လိုက်နာသင့်သော အချက်များ
လှပကောင်းမွန်သော အသားအရေဖြစ်စေဖို့ လိုက်နာသင့်သော အချက်များ မိန်းမမြတ်တို့ရဲ့ လက္ခဏာတွေထဲကတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ အသားအရေ၏ကောင်းခြင်းကို အမျိုးသမီးတိုင်းလိုချင်ကြမှာမလွဲဧကန်ပါ။ သူ့တို့ချည်းသာလောဆိုရင်…..မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျန်းမာကောင်းမွန်တဲ့အသားအရေဟာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးမဟူ လိုအပ်ပါတယ်။ လှပကောင်းမွန်သော အသားအရေဖြစ်ဖို့အတွက် ရိကထ၊အကုန်အကျမများပဲ လိုက်နာလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အကျိုးရှိတဲ့အချက်ကလေးတွေအကြောင်းကို ဒီနေ့အဖို့ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ လှပကောင်းမွန်သော အသားအရေဖြစ်စေဖို့ ဘယ်အရာတွေကိုလိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမလဲ???? အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ကလေးတွေဟာ…
ဆီးခံဝမ်းခံလောင်ကွက် မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ မေမေဖေဖေတို့ကြုံတွေ့နေကျဖြစ်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေမှာဖြစ်သော ဆီးဝမ်းခံ(Diaper)ကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရေပြားလောင်ခြင်းကို မည်သို့မည်ပုံကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုပြောကြရအောင်။ ကာကွယ်နည်းမပြောခင်မှာ Diaper rash ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်း အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ Diaper rash ဆိုတာ ဘာလဲ??? Diaper rash ဆိုတာဟာ ဆီးဝမ်းခံ(Diaper)ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားလောင်ခြင်း(ဝါ)အရေပြားရောင်ယမ်းခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ…